Kanada: Obodo ndị Inuit a na-akpọ Kanjisuk nke dị́ n’ebe ugwu Kwebek
Izi Ndị Kanada Niile Ozi Ọma
A sụgharịala vidio anyị bụ́ Olee Uru Ịmụ Baịbụl Ga-abara Gị? n’asụsụ asatọ n’ime asụsụ ndị a na-asụ n’ebe alaka ụlọ ọrụ anyị dị́ na Kanada na-elekọta. N’ọnwa Ọktoba afọ 2014, ụfọdụ ụmụnna anyị gara kwusaa ozi ọma abalị iri na Nunavik. Ha gosiri ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ ezinụlọ niile dị́ n’ebe iri na anọ ha gara kwusaa ozi ọma vidio anyị ahụ. Ndị bi n’ebe ndị ahụ karịrị puku mmadụ iri na abụọ.
Àgwà Ha Masịrị Onyeisi Ámá Egwuregwu
N’ọnwa Septemba afọ 2014, e nwere mgbakọ mba niile n’ámá egwuregwu Sangam dị́ na Saụt Koria. A nọ n’ámá egwuregwu a zọọ iko mba ụwa. Ihe karịrị puku mmadụ iri ise na isii bịara mgbakọ a. Onyeisi ámá egwuregwu ahụ kwuru na obi dị ya ụtọ maka otú ụmụnna anyị si kpaa àgwà ọma ma mee ihe ndị a sịrị ha mee. Ọ sịrị: “Ndị niile bịaranụ kpara àgwà ka ndị a zụrụ azụ. Ọ tụrụ m n’anya ịhụ ka ha na-ehicha ámá egwuregwu a otú dị mma karịa otú ndị bụ́ aka ochie anyị na-akwụ ụgwọ si ehichara anyị ya. Ọ dị m ka ya bụrụ na ndị na-arụrụ anyị ọrụ si otú a arụrụ anyị ya. Ọ bụrụ na a sị ka ndị mmadụ kpewe okpukpe otú e kwesịrị isi na-ekpe ya, anyị niile kwesịrị ịbụ Ndịàmà Jehova.”
Saụt Koria: Mgbakọ mba niile e mere na Sol n’afọ 2014
Jehova Kụziiri Anyị Ihe Anyị Ga-aza
N’ọnwa Mee afọ 2012, gọọmenti Swidin jụrụ ịnabata akwụkwọ Ndịàmà Jehova degaara ha na-arịọ ha ka ha na-enye ha ihe ndị ha na-enye ndị okpukpe ọzọ. Ebe ọ bụ na ha jụrụ, Òtù Na-achị Isi nyere ikike ka e wepụ okwu ahụ n’Ụlọikpe Kasị Elu na Swidin.
Ụlọikpe ahụ kpebiri ka Ndịàmà Jehova bịa zara ọnụ ha tupu ha ekpebie okwu ahụ. Ọtụtụ ụmụnna anyị si mba dị iche iche bịa ka ha tụlee ajụjụ ndị ụlọikpe ahụ nwere ike ịjụ anyị nakwa otú anyị ga-esi aza ha. Ha zukọtara n’Ụlọ Nzukọ Alaeze dị na Stọkhọlm ka ha mụgharịa otú ha ga-esi aza ajụjụ ndị ahụ.
Mgbe ha na-amụgharị ha, mgbịrịgba ọnụ ụzọ Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ kụrụ. Otu nwanna nwoke bịara meghee ụzọ ma hụ ụmụntakịrị nwaanyị abụọ dị afọ iri na atọ na afọ iri na anọ. Ha kọwaara nwanna nwoke ahụ ndị ha bụ, gwa ya na ha chọrọ ịmata ihe ụfọdụ gbasara Ndịàmà Jehova. Nwanna nwoke ahụ mechara kwuo, sị, “M chọrọ ịgwa ha ka ha bịaghachi oge ọzọ n’ihi na anyị enweghị ohere.”
Ma, nwanna nwoke ahụ gere ha ntị. Ụmụaka ahụ jụrụ ya ọtụtụ ajụjụ, ụfọdụ n’ime ha bụ maka ihe ndị gbasara ọhaneze nakwa ịtụ vootu. Mgbe ọ zachara ha ajụjụ, ọ banyeghachiri n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ gwa ndị ọzọ ajụjụ ndị ha jụrụ ya na ihe ndị ọ zara.
N’echi ya, ọ tụrụ ụmụnna anyị n’anya na ọtụtụ ajụjụ ndị ụlọikpe ahụ jụrụ ha bụkwa ajụjụ ụmụaka ndị ahụ jụrụ. Nwanna na-anọchite anya nzukọ anyị kwuru, sị: “Ahụ́ ruru m nnọọ ala mgbe ụlọikpe ahụ na-ajụ m ajụjụ, ọ bụ eziokwu na ụjọ gaara ejide m n’ihi na ndị na-ajụ m ajụjụ ndị ahụ bụ ndị ọkàiwu a ma ama n’obodo anyị. Anyị weere ya na Jehova nyere anyị ọzụzụ anyị chọrọ tupu ụbọchị ahụ, si otú ahụ gosi na ọ kwụ anyị n’azụ.”
Ụlọikpe ahụ kpelaara anyị ikpe, gwakwa gọọmenti ka ha meere anyị ihe anyị rịọrọ ha.
Akpa Osikapa Ken
Na Heiti, e nwere otu nwata nwoke dị afọ isii aha ya bụ Ken. Obi tọrọ ya ụtọ mgbe ọ nụrụ na a na-aga ịrụrụ ọgbakọ ha Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ọ rụrụ igbe ọ ga na-etinye ego ma zoo ya n’ụlọ ya. Ọ na-etinye ya ego nne na nna ya nyere ya zụrụ ihe n’ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ ihe a ka o megidere ruo mgbe ndị bịara ịrụrụ ha Ụlọ Nzukọ Alaeze malitere ịrụ ya. O bunyeziri ha igbe ahụ. Ego dị na ya zuru ịzụta otu akpa osikapa, n’ihi ya, ha ji ya zụta ya. Ọ bụ osikapa ahụ ka ndị bịara ọrụ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze na-eri n’ehihie ruo ọtụtụ ụbọchị.
Onyeisi Ndị Amị Ekweta Ka E Nye Anyị Ikike
N’oge ọrịa Ebola na-akpa ike ọjọọ na Siera Lion, anaghị ekwe ka ndị mmadụ gaa n’ebe ndị a machiri ndị mmadụ ịga n’anataghị ikike. Dị ka ihe atụ, ndị nlekọta sekit chọọ ịga ebe ndị ahụ, ha na-anata baajị na ikike ha ga-eji nyara ụgbọala ha banye ebe ndị ahụ. Ndị na-ebuga akwụkwọ anyị na akwụkwọ ozi anyị n’ebe ndị ahụ na-anatakwa ikike. Mgbe ọ bụla Kọmitii Na-ahụ Maka Ịgbatara Ndị Ọdachi Dakwasịrị Ọsọ Enyemaka chọrọ ibuga ihe e ji ele ahụ́, blich, na ihe oriri n’ebe ndị ahụ, ha na-enwetakarị akwụkwọ ikike.
O nwere ihe mere otu ụbọchị nke na-eme ka okwukwe anyị sie ike. Ụmụnna anyị degaara ndị ọchịchị akwụkwọ na-arịọ ka e nye ha baajị iri atọ na anọ na akwụkwọ ikike ha ga-eji nyara ụgbọala iri na otu gaa ebe ndị ahụ. Tupu e nye ha ya, ha ga-ebu ụzọ hụ onyeisi ndị amị. Ụmụnna abụọ sí n’alaka ụlọ ọrụ gara hụ onyeisi ndị amị a n’ụbọchị ha chọrọ ka e nye ha ya. Ndị nọ ebe ahụ chọgidere akwụkwọ ozi ahụ ụmụnna anyị detara mana ha ahụghị ya. Ha gwaziri ụmụnna abụọ ahụ ka ha jiri aka ha chọọ ya n’ime akwụkwọ ozi ndị ọzọ dị ebe ahụ. Mana ha ahụghịkwa ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka onyeisi ndị amị ahụ gwara odeakwụkwọ ya na ya emechiwela ọfis ya nakwa na e nweghị akwụkwọ ozi ọzọ ha ga-eleba anya ruo izu abụọ. Ụmụnna ahụ kpere ekpere n’obi ha rịọ Jehova ka o nyere ha aka n’okwu a. Onyeisi ndị amị ahụ lere ha anya jụọ ha, sị, “Baajị ole na akwụkwọ ikike ole ka unu chọrọ?” Mgbe ha gwara ya ole ha chọrọ, o biliri n’oche ya tie mkpu, sị, “O buka!”
Ụmụnna anyị kọwaara ya ọrụ anyị na-arụ nakwa otú ihe anyị na-ebuga n’ebe ndị ahụ ọrịa Ebola na-akpa ike si na-enyere ndị mmadụ aka. Onyeisi ndị amị ahụ kwụsịtụrụ, lee odeakwụkwọ ya anya ma sị ya, “Nye ha ihe niile ha chọrọ.”
Gini na Siera Lion: Ebe ndị mmadụ na-akwọ aka n’Ụlọ Nzukọ Alaeze